प्रतिनिधि सभा सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
० एमाले र माओवादी अहिले एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएको छ । यो एकीकरण पश्चात् माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भएको हो पनि भन्ने गरिन्छ । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
— यो गलत कुरा हो, देशमा आन्दोलनको राजनीति समाप्त भएको छ । केही मधेशका मुद्दाहरू, संविधानमा असन्तुष्टि छ त्यसलाई पूरा गरेपछि हाम्रो देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको छ । पहिले धेरै आन्दोलनहरू भए, धेरै ऐतिहासिक उपलब्धिहरू पनि भएका छन् । देशमा संघीयता आएको छ, गणतन्त्र आई तीनै चरणका निर्वाचनहरू सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयनको तहमा रहेको छ । यसमा धेरै पार्टीहरू रहेर अस्तव्यस्त हुनुभन्दा र देश अस्थिरताको भुमरीमा परेको हुँदा देशलाई एउटा निकास दिनको लागि पनि जसको एजेण्डा मिल्छ तिनीहरूबीच मिल्नु बाहेक अरू विकल्प छैन । त्यसकारण नै चुनाव भन्दा अगाडि माओवादी र एमालेले वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ेको हो । जनतामा एजेण्डाहरू प्रस्तुत गरेको हो । त्यसलाई जनताले बुझेर बहुमतले यहाँसम्म पु¥याएको छ । स्थायी सरकारको रूपमा हामीले लिनुपर्छ ।
० नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना हेर्दा मुख्य मुख्य पदमा माओवादी भन्दा एमालेकै वर्चश्व देखिन्छ, यसलाई कुन रूपमा लिने ?
— सहमतिबाट नै हामीहरू चुनावमा गएका थियौं । जो जहाँ जित्ने साथीहरू छन्, एमालेले जितेको र क्षमता भएको व्यक्ति र माओवादीको पकड रहेको ठाउँमा माओवादीबाटै क्षमतावान व्यक्तिलाई टिकट दिएका हौं । निर्वाचनको समयमा पनि हामी एउटै पार्टी जसरी नै गएको हुनाले र एउटै एजेण्डा बोकेर निर्वाचनमा समावेश भएको हुनाले यो मलाई फरक परेको जस्तो लागेको छैन ।
० तर पार्टीका कतिपय नेताहरू असन्तुष्ट छन्, माओवादी केन्द्र अझै पनि यथावत नै छ पनि भन्ने गरिन्छ नि ?
— पार्टीभित्रका सबै व्यक्तिहरूलाई पद दिन सकिदैन । पहिले पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टी त थियो । सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो, धेरै लामो बहस र छलफल गरेर मात्रै हामीले यो निर्णय लिएका हौं । बाहिर यो एकता हुँदैन कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको थियो । यो ढिला हुनुको कारण पनि तलदेखि माथिसम्म सबै तहका नेता कार्यकर्तालाई समायोजन गर्दै हामीले यो पार्टीलाई एक धारमा लैजानुपर्छ र यसलाई एक गर्नका लागि गुट–उपगुट होइन सबै साथीहरूलाई मनाएर नै यो अवस्था आएको हो । धेरै लामो समयसम्म अन्योलता रहेको थियो, यो टुट्छ भन्ने किसिमका शंका पनि आइरहेका थिए र तर यो एकीकरण भएर नै छाड्यो । असन्तुष्ट साथीहरू पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट थिए । एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा पनि गएका हुन । यहि पार्टीको कारणले गर्दा हो जस्तो मलाई लाग्दैन । उनीहरूको आफ्नो–आफ्नो बुझाई फरक भएको पनि हुन सक्छ । धेरै समयसम्मको छलफलको प्रयासबाट नै एकीकरण सम्भव भएको हो ।
० नेकपाको मधेश नीति स्पष्ट छैन, तपाईको विचारमा नेकपाको मधेश नीति के हो ?
— मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किनभने संविधान बन्दा एउटा दृष्टिकोण थियो, संविधान बनिसकेपछि मधेशका असन्तुष्ट पक्षहरूलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ भन्ने नै हो ।। संविधान संशोधन गर्नै नसकिने होइन, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संविधान फेरबदल गर्न सकिन्छ भन्दै आउनु भएको छ । संविधान बदल्नै सकिन्न भन्ने कुरा होइन । त्यसकारण पनि होला अहिले संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा आएको छ ।संविधान संशोधन गरि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर देशमा आर्थिक समृद्धिको बाटोमार्फत अगाडि बढ्ने र देशलाई निकास दिने भनि सहमति पनि गरिएको छ ।
सबैभन्दा बढी मधेशलाई नै टार्गेट गरेर काम गरेको छु । मधेश विरोधी दखाइए पनि मधेशप्रति म सकारात्मक छु । मधेशका लागि काम गर्नेछु र यसको समाधान म आफैले गर्न सक्छु । पहिलाको भूमिकामा र अहिलेको यथार्थमा भूमिका अलि फरक देखिएको छ ।
० नेकपाका अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली पहिले भन्दा अहिले नरम भएपनि बोलेको कुरा यथार्थमा आएको छैन, संविधान संशोधनको बारेमा अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन ?
— केही दिन अगाडि मात्रै त संघीय समाजवादी फोरमसँग सहमति भएको छ । अब बसेर छलफल गर्नेछौं । जायज माग हामी पूरा गर्न तयार छौं । आन्दोलनबाट आउनुभएका उपेन्द्र यादवजी पनि सहमतिमा आउनुभएको छ । राजपा पनि समर्थक छन् । संविधान संशोधनबाट मधेशका समस्याहरू समाधान गर्ने र समृद्धिका यात्रामा जाने नेकपासँग सम्झौता भइसकेको छ । राजपाले पनि तत्काल नै सहमति नजनाए पनि केही समय पश्चात उ प िसरकारमा आउनेछ । मलाई विश्वास छ, मधेशको समस्या भाषण गरेर मात्रै होइन नीतिगत रूपमा हल गरेर जानुपर्छ र हाम्रो पार्टी पनि यस विषयमा गम्भीर छ ।
० सरकारलाई राजपा र फोरमको समर्थन हुँदा हुँदै पनि सहमति नै गर्नुपर्ने कारण के हो ?
— हामीले त कार्यान्वयन गर्छौं भनेकै थियौं । मेरो विचारमा संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा जानका लागि कमिटमेन्ट गरेको छ कि सम्झौता नगरेसम्म हामी जाँदैनौं भन्ने कुरा थियो । छलफल त चल्दै थियो तर उ सरकारमा जानका लागि पनि जनताका सामु मैले सम्झौता गरेको छु भन्नलाई पनि यो सम्झौता गरेको हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, सम्झौता त धेरै पहिला भइसकेको छ । नेताहरूबीच छलफल पनि भइरहेको छ । हामी पनि यसको पक्षमा छौं । मधेशको समस्या हल नगरी देशको शान्ति स्थापना गर्न सकिदैन भनेर पार्टीभित्र पनि लडाई गरिरहेका छौं । लामो समयसम्मको संघर्षलाई संविधानमा मधेशको विषयलाई उल्लेख गर्दै हामीले सम्बोधन ग¥यौं भने देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।
० फोरम नेपाललाई सरकारमा जानलाई हतारो थियो भनेर मात्रै सम्झौता गरेको हो ?
— मैले हतारो भन्न खोजेको हैन । सम्झौता त पहिले नै भइसकेको थियो र छलफल पनि हुँदै थियो । नेकपाका नेताहरूले मधेशवादी दलहरूसँग छलफल गर्दै जायज मागलाई पूरा गर्ने, संविधान तटस्थ होइन यसलाई संशोधन गरि जान्छौं भन्दा बोलिको भन्दा लिखित सम्झौता बढि प्रभावकारी हुने र जनताले पनि बुझ्ने भएकाले सम्झौता गरिएको हो । हुन त विगतमा पनि सम्झौताहरू धेरै भए तर कार्यान्वयन भएन तर विश्वास गरौं कि अहिलेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनेछ र संविधान संशोधन हुनेछ ।
० यो सरकारले कहिलेसम्म संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा पेश गर्छ ?
— अहिले प्रक्रियामा चलिरहेको छ । अझै पनि धेरै प्रस्तावहरू आउन बाँकी नै छ । मलाई लाग्छ यो सहमतिबाट नै हुन्छ । नेकपाले संविधान संशोधन गराउँछ भन्ने कुरामा म पनि धेरै नै आशावादी छु ।
० संविधान संशोधन फोरम र राजपाको नै माग हो तर नेकपाले फोरमसँग मात्र सम्झौता गरेको छ, राजपालाई किन बाहिर राख्यो ?
— यो विषय हाम्रो पार्टीको नभई राजपा र फोरमको सम्बन्धको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले फोरमसँग मात्रै सम्झौता गर्छौं राजपासँग गर्दैनौं भनेका छैनौं । उनीहरूबीच कुनै असमझदारी भयो होला, सम्झौता गर्ने क्रममा राजपालाई बोलाएको छैन होला । केही विशेष कारण बीचमा यी सम्झौता भएको छ । राजेन्द्र महतोसँग हामीले कुरा गर्दा हामी पनि यसैको पक्षमा छौं, उपेन्द्रजीले हामीलाई खबर गर्नुभएन भन्ने कुरा गर्नुभयो । फोरमले सम्झौता गरेर सरकारमा गयो भनेर उहाँले सकारात्मक कुरा नै गर्नुभयो । उहाँहरूको एक आपसमा कुरा नमिलेर होला । तर राजपाको पनि यसमा समर्थन छ ।
० राजपाको माग भनेको आन्दोलनको समयमा झुटा आरोप लागेका सांसद रेशम लाल चौधरीको रिहाई पनि रहेको छ, यो त सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर पनि गर्न सक्छ, तर सरकारले गरेको छैन, यदि राजपाको यो माग पुरा गरेको भए त राजपा पनि सरकारमा जान सक्छ नि ?
— यो कुरामा सबैजना सकारात्मक नै छन् । रेशमजीको विषयमा उहाँ अनशन बसेको ठाउँमा गएर नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उहाँको मागलाई पुरा गर्ने बाचा सहित अनशन तोडाउनु भएको हो । यसलाई नीतिगत रूपमा हल गर्नपर्ने हुन्छ । किनभने यो मुद्दा उहाँको मात्रै होइन, धेरैको हो । केही समय अगाडि मात्रै सांसदलाई निलम्बन नगर्ने भन्ने विधेयक केही साथीहरूले असन्तुष्ट जनाए पनि पछि उहाँहरूले पनि समर्थन गर्नुभयो र त्यो संसदमा पास भयो । त्यस्तै यो कुरामा पनि धेरै सकारात्मक नै छन् । यो विधेयक पनि संसदबाट पास हुनेछ र उहाँको यो समस्या हल भई सपथ खाने वातावरण बन्छ ।
० रेशमलाल चौधरीको जस्तै मधेश आन्दोलनका क्रममा झुटा आरोप लाग्ने धेरै छन्, आन्दोलनको घटनाको प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए त सरकारलाई निर्णय गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो होला नि ?
— रेशम चौधरीसँग जोडिएका धेरै घटना छन् जसलाई एकै किसिमले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति बनाएर समाधान गर्दा अलि धेरै समय लागेको हो । यो समस्याको पनि छिटो भन्दा छिटो समाधान गरिनेछ ।
० तपाईं प्रदेश २ बाट प्रतिनिधि भएको हैसियतले पनि यस प्रदेशको विकासको लागि संसदमा के कस्ता कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ ?
— प्रदेश २ को पनि महोत्तरीसँग जोडिएको हुँदा यस जिल्लामा भएको जलेश्वर–जनकपुर सडकखण्ड एकदम दयनीय अवस्थामा छ । वर्षातको समयमा सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा समेत कठिनाई भएकाले चाँडै नै यो सडक बनाइयोस् भनेर आवाज उठाएको छु । जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्डको पनि मैले कुरा उठाएको छु । चुरे संरक्षणमा, महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिमको बारेमा पनि मैले कुरा उठाएको छु । मैले आफूले गर्न सक्ने यस प्रदेशको लागि काम गर्नेछु ।